Ngeke Ube Blogging Phakade | Martech Zone
Ngeke Ubhulogi Phakade
NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, i-2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho ngikhuluma nabantu ngokubhuloga, iningi labo liyangibuza ukuthi ukubhuloga kulapha ukuhlala yini.
Ukubuza umuntu ukuthi ukubhuloga kuzoba lapha kuze kube phakade kufana nokubuza abafana ababeprinta amaphephandaba abo ngomshini weGutenberg ngokufanayo. Njengomshini wokushicilela wamahhala, ukubhuloga kuzoguquka ngobuchwepheshe, ama-blogger anokulandelwa okukhulu ayothengwa, futhi amabhulogi azohlanganiswa futhi ashumekwe namanye ama-medium ukuxhumana.
Ukubhuloga kuya ngokushesha the okuphakathi necebo lezinkampani, kepha ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba i-ego evuvukele ibuyele emuva 'kwenye indlela yokuxhumana' ephezulu lapho enezimpawu, indawo, i-imeyili, amawebhusayithi, nokuxhumana nabezindaba zenhlalo.
Ama-blogger anekhono azoncika ekusizeni izinkampani ukuhambisa inaliti. Iminyaka embalwa elandelayo izoba yinhle kuma-blogger, azoqhubeka nokushayelwa yizinhlangano ezinkulu noma ngokubonisana noma ngokugcwele. Kuhle ukukuzwa lokho, akunjalo? Kusho ukuthi yonke le nto ibikufanele - ukwethembeka kanye nokwenza izinto obala can ikulethele impumelelo.
Kulelo nothi, sihalalisela ULoren Feldman, i-blogger ephumelelayo ezobe ibhala okuthile namavidiyo we-c | net.
Inothi eliseceleni: Ngenkathi ngikhwantabalaza ngokuxokozela kukaLoren, ngokuxokozela, ebusweni, ebusweni e-East Coast rants… noma ngokungafanele ngimbuke evula embhedeni - ngiyakwesaba ukungafihli lutho nempumelelo yakhe. Ukhombisa ukuthi ungaba neqiniso, ube ngokwakho, ube nemibono, bese uphumelela.
Ukuphi Ukubhuloga Kuya?
Kuzoba nokusha kokubhuloga ngokuzayo, njengamaphephandaba… kepha ngeke kuthathe iminyaka eyikhulu namashumi ayisihlanu. Umbono wami we-blogger yesikhathi esizayo ungahle ubandakanye ukuqashelwa kwezwi lokukhuluma kuya embhalweni okudluliswa kusihlungi sohlelo, ngama-algorithm ahlakaniphile ahlela okuqukethwe, kanye 'nokubukwa' okwenziwe ngokuzenzakalela kokuqukethwe okuhlobene okutholakala kuwebhu.
Ukubhuloga Kwebhizinisi ngokuzayo kungenzeka kubuyele emuva kwezokuMaketha, noma ngabe silwa njengesihogo ukukugcina kungabikho lapho namuhla. Isizathu sokuthi silwe manje yingoba imiklomelo yokuMaketha ivamise ukunikezwa ukuphelela, ubuhle ne-finesse - hhayi imiphumela, ubuqiniso kanye nokwenza izinto obala. Ama-blogger nokubhloga akuhambelani nepulazi lesimanje le-Marketing Executive.
Lapho nje izinkampani zibona ukuthi impumelelo yazo ibangelwa ukuthi bakhulumisana kahle kanjani futhi bakhuthaza kanjani ubudlelwane namakhasimende abo kanye namathemba abo, iminyango Yezokumaketha izoqala ukwazisa umuntu onamabhola okungena kubhulogi ayitshele njengoba injalo. Lapho bekwenza, ukumaketha kuzoshintsha futhi nezinkampani ziyoba ngcono ngakho.
Uma kuyinto ejwayelekile ezinkampanini, izoshintsha impilo ye-blogger ezimele njengami. Izinkampani zizofuna labo abanabalandelayo, abakwazi ukubhala kahle, bese bebadonsela esikhwameni sabo sezinto ezinhle. Ukube bengigijima HP, Dell, IBM or Cisco, Bengizobe ngifaka ubukhona bami bewebhu ngama-blogger namuhla - ngaphambi kokuthi bonke bahambe kusasa.
Lapho wonke umuntu ebhuloga, kungenzeka sithuthukiselwe ukugqama komunye umuntu noma sishabalale siye kufifi. Ungakhululeki, ngeke sibe lapha isikhathi eside.
Wabambelela endizeni amahora angu-3.5
UJun 7, 2008 ngo-10: 21 AM
O, ngifisa sengathi ukubhuloga kungaqhubeka unomphela. Kepha uma kuzofanele ngikhiphe isifiso esingokoqobo, ngiyethemba nje ukuthi sizohlala iminyaka emihlanu kuya kwengu-5. Angikayitholi impumelelo engizifunela yona kulo mkhakha, noma kunjalo kufanele ngivume ukuthi anginaso isikhathi esanele sokwenza lokho (ukubhuloga) ngenxa yeminye imizamo. Noma kunjalo, ngifisa ukuthola impumelelo, noma ngilinganiselwe, kuma-blog wami, nakumabhulogi engifisa ukuwathola ngokuqhamuka.
Jun 7, 2008 ku-12: 46 PM
Ngicabanga ukuthi izinguquko zizokwenzeka njengoba ubuchwepheshe buguquka, sizoba namathuluzi ahlukene okwenza umsebenzi wethu futhi ngalokho izinto zizothatha uhlangothi oluhlukile. Isibonelo esisodwa yi-PC ephathekayo ephathekayo, sonke singathola eyodwa yalezo futhi ezibandakanya ukubhuloga kaningi kusuka kuyo yonke indawo (mhlawumbe lokho sekuvele kwenzeka.)